तीन महिना घाम नलाग्ने गाउँमा कृत्रिम सूर्य बनाइयो
एजेन्सी । अहिले जाडोको मौसम सुरु भैसकेको छ । यतिबेला घामको न्यानो तापको छुट्टै आनन्द हुन्छ । प्राय सबैले सोच्ने गर्छन ‘घाम कहिल्यै नअस्ताए हुन्थ्यो ।’ विश्वमा यस्ता स्थानहरु पनि
विश्वव्यापी इन्टरनेट कभरेज गर्न अमेजनले उपग्रह पठाउँदै
एजेन्सी । ब्लु ओरिजिनसँगको सहकार्यमा अन्तरिक्षमा दुई मानव उडान उडाएर विश्व रेकर्ड तोडेपछि अमेजनले आफ्नो पहिलो उपग्रह प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ। विश्वभर छिटो र किफायती इन्टरनेट कभरेज प्रदान गर्न अमेजनले
स्क्विड क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य अकासिएर किन झर्यो शून्यमा ?
नेटफ्लिक्सको चर्चित शृङ्खला स्क्विड गेमबाट नाम राखिएको एउटा डिजिटल टोकन जाली हुनसक्ने विवरण आएपछि त्यसको मूल्य लगभग शून्यमा झरेको छ। खेलेर कमाउन सकिने क्रिप्टोकरेन्सीका रूपमा प्रचार गरिएको स्क्विडको मूल्य केही
दुई वर्षभित्र आफ्नो फोन ‘रिसेल’ गर्न चाहनुहुन्छ ? यसाे गर्नुहाेस्..
काठमाडौं । कुनै फोन बजारमा आएको १२ देखि २४ महिनाभित्रमा त्यसको मूल्य घट्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। युकेबाट प्रकाशित उक्त रिपोर्टअनुसार आइफोन १२ प्रो बजारमा आएको ६ महिनामा यसको
नेपालमा स्टार्टअप्सको प्रवर्द्धनका लागि समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपालमा नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय (स्टार्टअप्स) को प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप्स अभियान समिति गठन गरेको छ । युवा उद्यमी आयुषी केसीको सभापतित्वमा गठन भएको समितिको कोअर्डिनेटिङ
चुहावट भएका आन्तरिक गोप्य कागजातहरूका कारण सिर्जना भएको विवादको परिणाम स्वरूप कम्पनीले भोगेको दबाबबीच फेसबुकले तेस्रो चौमासिकमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो नाफा कमाएको छ। विश्वकै विशाल मध्येको यो सामाजिक सञ्जालले सेप्टेम्बरसम्मको
आमाहरुलाई सचेत पार्ने एक रिसर्चः रातमा मस्त निदाउने बच्चामा तौलबारे यस्तो रिपोर्ट
एजेन्सी । रातमा राम्रोसँग निदाउने शिशु नमोटाउने एक रिसर्चले आफ्नो रिपोर्टमा सार्वजनिक गरेको छ । ३०० जना नवजात शिशुहरुमा भएको ६ महिनाको रिसर्चका आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
भैंसीको बेमौसमी प्रजननमा नेपाली वैज्ञानिकलाई सफलता
काठमाडौं । दूध र मासुका लागि पालिने भैँसीको बेमौसमी प्रजनन गराउन नेपालका विज्ञहरू सफल भएका छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि भैँसीको बेमौसमी प्रजनन गराउन गरेको अनुसन्धान सफल भएको
चन्द्रमामा अब विद्युतीय मोटरसाइकल, १५ किमी प्रति घण्टाको गति
एजेन्सी । जर्मनीको अटो डिजाइन गर्ने कम्पनी हुकीको निक वोन हुकीले चन्द्रमामा कुद्ने विद्युतीय मोटरसाइकलको डिजाइन तयार पारेका छन् । टर्डीग्रेड नाम गरेको यो बाइक १५ किमी प्रति घण्टाको गतिमा
नियमित ध्यानले गल्ती घटाउँछः वैज्ञानिक अध्ययन
काठमाडौं । कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन ? आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले